Musiyano uripo pakati pesimba remvura nemafungu emhepo | Green Renewables
Musiyano uripo pakati pesimba remvura nemafungu emagetsi
Daniel Palomino | | Updated on 08/03/2017 15:23 | Simba remvura yegungwa, Wave Simba
Simba rese rinobva kugungwa, asi unoziva here kuti simba remafungu uye simba remafungu zvinobva kupi?
Ichokwadi chiri nyore kwazvo kuziva kuti isimba ripi uye nderekuti iro zita rinopa zvakawanda zvinoratidza, semuenzaniso mafungu, anobva kumafungu uye mafungu, zvatove zvakaoma zvishoma, zvinouya wave.
Muchidimbu uye neruzivo rwekutanga iwe rwaunofanirwa kuchengeta nderekuti iyo Simba remvura yegungwa sezvatakataura kuti zvinobva kumafungu, kufamba kunosanganisira kukwira kwegungwa uye yakaburitswa kanokwana kaviri pazuva nekukwezva kweMwedzi.
Iko kushandiswa kwerudzi urwu rwesimba kwakanyanya yakafanana ne hydropower (Tichataura nezvazvo mune ramangwana). Kana tichinge tave nedhamhu riri muchikepe (muromo wedziva unoumbwa nerumwe ruoko rwakafara muchimiro chefunnel rakawedzeredzwa) ine magedhi uye ma hydraulic turbines akaiswa, isu tinopa kukosha pakureba kunogona kusvika nemasaisai.
Ndokunge, kana mvura yepamusoro yave kuda kusvika (mafungu achikwira), magedhi anovhurwa nekutenderedza turbine nemvura inopinda muchikepe uye ndokuunganidza mvura inokwana uye nekudaro inokwanisa kuvhara magedhi kudzivirira mvura kubva pakudzokera kugungwa.
Kana kamwe mvura yakadzika yasvika (mvura yakadzika), mvura inoburitswa kuburikidza nemagetsi.
Aya mafambiro emvura anoita kuti turbines atenderere ese ari munzira yekupinda nekusiya mvura uye ndizvo zvinogadzira uku kugadzirwa kwesimba remagetsi.
Mune simba remhepo tinogona kuwana zvese zvakanakira nekuipira.
Mukati mezvakanaka zvinogona kutaurwa kuti isimba rinogona kumutsidzirwa uye kuti isimba rakajairika, nekuti panogara paine kufamba kwemafungu zvisinei negore.
Nekudaro, izvo zvinokanganisa zvakakura, senge zvine simba rekugadzira simba, iwe unofanirwa kumirira kutanga uye kwanonoka masikati kuti uburitse, kukura uye mutengo wezvivakwa zvako, nezvimwe.
Kune rimwe divi isu tine iyo wave simba, icho hapana chimwe chinopfuura simba remafungu sezvandambotaura uye ndizvo zvazviri mafungu egungwa ane huwandu hwesimba inotorwa kubva kumhepo, kuitira kuti pamusoro pegungwa paonekwe seanonyudza muunganidzi wemhepo simba.
Iyo ndeimwe yemhando dzesimba rinodzokororwa dzinonyanya kufundwa nhasi uye kune akati wandei michina senge iyo Cockerell's Raft uye Dhadha raSalter kushandura wave kufamba kuita magetsi
Dhadha reSalter rinoyangarara muchimiro chedhadha (saka izita raro) apo chikamu chidiki-diki chinopikisana nemafungu kuitira kutora kufamba kwavo pamwe nekukwanisika. Izvi zvinoyangarara zvinotenderera pasi pekuita kwemafungu akakomberedza axis zvichipa kufamba kwekutenderera kwakatenderedza axis yayo, ichikwanisa kumisa pombi yemafuta, inotarisira kufambisa turbine.
Pane zvinopesana, iyo Cockerrel raft ine mapuratifomu akajekeswa akagadzirira kugamuchira zvinoitika zvemafungu. Aya ma rafts anomuka uye anodonha nerubatsiro rweichi chikamu chekutyaira injini inofambisa jenareta kuburikidza neiyo hydraulic system.
Nekudaro, kune zvimwewo zvakanaka nezvakakanganisika, seyakanaka isu tinoona kuti kukanganisa kwezvakatipoteredza hakuna zviripo, mazhinji emahombekombe emahombekombe anogona kuverengerwa muchiteshi kana kumwe zvivakwa pasina kutaura kuti isimba remagetsi rinowanikwazve.
Sezvakaipira; Simba remasaisa harigone kufanotaurwa nenzira kwayo, nekuti masaisai anoenderana nemamiriro ekunze, munzvimbo dzekumahombekombe, zvakaoma kwazvo kuendesa simba rakagadzirwa kunzvimbo yakaoma, nezvimwe.
Sezvauri kuona, zviri nyore kusiyanisa mhando mbiri dzesimba dzinogadzirwa mugungwa, kunyangwe isu tichigona zvakare kutora mukana wesimba kubva kumafungu egungwa, kushandurwa kwesimba remafuta anopisa uye kunyangwe simba kubva kuiyo saline gradient, chimwe chinhu chisingawanzoitika asi kuti Nhasi tiri kudzidza kuti tiwane zvakanakisa kubva mumakungwa uye kuyedza kuti mune ramangwana maguta ese anogona kuzviriritira nemhando idzi dzesimba rinowedzerwazve.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Simba remvura yegungwa » Musiyano uripo pakati pesimba remvura nemafungu emagetsi
VaFrance vanga vaine nzvimbo yavo yekurwara nemotokari muchikepe cheRance Rwizi kwemakore makumi mashanu, uye kusiyana naZapatero, ivo vanobheja pakutsvagisa mune simba iri, vaine chiitiko chimwe chete, pachinzvimbo chekupa mabhiriyoni eshangu mune simba, mune kuferefetwa, uye pasina kubatsira parizvino. Kana isu tatoziva kuti zvichave zvinobatsira mune ramangwana, saka isu tichaisa mari zvakakodzera mumatekinoroji.
Daniel Palomino akadaro
Ini handigoni kubvumirana zvakanyanya newe Josep.
Zvekutenda nekutenda nekutaura kwako.
Pindura kuna Daniel Palomino
Valladolid inokurudzira kushandisa bhasikoro nekuda kwekusvibiswa kwakanyanya
Spain ichafanirwa kuisa mari mumotokari dzemagetsi kutevedzera EU